Indlela Yokubakho Indwendwe kwi "Ellen DeGeneres Show"
Udinga Ibali Elikhulu Eliqaphelayo
Izidumi zivame ukunyulwa ukuba ziindwendwe kwimiboniso yencoko, kodwa kuthiwani ngabanye bethu? Singafikelela njani emini njengethi " I-Ellen DeGeneres Show "? Nangona ukufumana amathikithi akhululekile ukuhlala kubaphulaphuli kulula, kuba ngumhenwendwe kwi " Ellen " kunzima kakhulu.
U-Ellen Uthanda Amabali Abantu
U-Ellen DeGeneres ungumculi wokuqala kwaye ufikelele ngempumelelo umculi wakhe kumboniso womdlalo womini.
Imodeli yakhe ibangele impumelelo enkulu kwizizathu ezininzi, intloko phakathi kwabo kukuba uyabelana ngamabali athintekayo ngabantu abanyani.
Ulwahlulo lulo lonke ngokubhekisele ebomini bobubomi kwaye luyiphonsa into ehlekisayo. Yilokho eyenza yonke i siqendu " Ellen " iphosakele. Nangona ibali libuhlungu, ngandlela-thile ufumana indlela yokuqhayisa imvakalelo kwaye ujonge kwicala elihle. Ngamanye amaxesha, oku kuquka ukunika iindwendwe isipho esifanelekileyo esilungeleyo okanye into enokukwazi ukuguqula ubomi.
Ingongoma kukuba ukuze umemezwe njengendwendwe, kufuneka ube nebali elikhulu. Izingane ezinomdla, iintsapho zamajoni, unomama ongatshatanga, okanye ubani oye wanyamezela, unqobile, okanye ngubani owaziwayo kwaye ohlukile, ezi ziindwendwe ozakuzibona kwi " Ellen. "
Indlela yokufumana iNdaba yakho ibonwa nguEllen
Okokuqala, kufuneka uqonde ukuba " I-Ellen DeGeneres Show " inabasebenzi abakhulu ababethelela iindaba eziphathekayo kunye neendaba zoluntu kubahlali ukuba babe kwi-show.
Akunjalo u-Ellen ngokwakhe.
Okwesibini, ukuthumela ibali lakho kumboniso akusayi kukufumana isimemo. Nangona kunjalo, ngokungafani neentetho ezininzi, "u- Ellen " unomdla wokwenene kubaphulaphuli.
Ukuba uphequlula kwikhasi elithi "Thumela ku-Ellen" kwiwebhsayithi yokubonisa, uza kufumana amathuba amaninzi ukwabelana ibali lakho.
Abanye bacela amavidiyo amnandi okanye imifanekiso xa abanye becela amabali apheleleyo. Ngokomzekelo, banokufowunelwa rhoqo kwiintsapho zasemkhosini kunye nabantu benza umsebenzi omkhulu oncedo kwiindawo zabo.
Ukuba unako ukubhala ibali elifutshane eliphosakeleyo, wabelane ngayo nabo. Ingaba isitishi sakho seendaba okanye iphepha libhala into ethile malunga nezenzo ezilungileyo wena okanye umntu omaziyo? Qiniseka ukuba ufake ibali kumyalezo wakho. Abavelisi baqhubeka bekhenkceza iindaba zendawo zengxelo zamanqaku ezomntu eziza kusebenza kumboniso, ngoko ke ukugcinwa kancinci akukwazi ukulimaza isizathu sakho.
Umboniso kunye no-Ellen banendawo ephosakeleyo yentsapho. Kuye kwakhokelela abanye abantu ukuba bathi ukuba nabantwana kwandisa ukwanda kweempawu zokufumana kwi-show. Nangona kuphela nje ividiyo yebantwana bakho bethola ukutya okutsha okokuqala, ividyo inokuthi ifike kwiTV (nangona ungenayo).
Enye indawo apho abavelisi beemiboniso bephendukela kumajelo asekuhlaleni. Ngokuqhelekileyo, baya kukhetha iindwendwe ezivela kwiividiyo zentsholongwane kunye nezithombe kwi-YouTube, Facebook, kunye ne-Twitter. Ukuba ubelana ngezihlandlo ezimnandi kwaye zihleka ngokwaneleyo, unokufumana i-imeyile emangalisiweyo ukusuka " Ellen " ngolunye usuku.
Into enye yokukhumbula kukuba akukho nto isiqinisekiso sokuthi uza kufumana " I-Ellen DeGeneres Show ." Ithelevishini yoshishini elinzima, iishedyuli zinzima kwaye zihlala ziguquka.
Kukho amabali ambalwa ajikelezayo axelela ukuba ngabavelisi baqhagamshelana nomntu kwaye ekugqibeleni, abazange bamenywe. Akukho nto ithetha ukuba ibali lakho alifanelekanga. Ngokuqhelekileyo, ngumcimbi wexesha kunye namabali amaninzi kakhulu okukhethayo.
Okubaluleke ngakumbi kukuba, kufuneka uhlale unyanisekileyo. Ungalithinti ibali lakho okanye uphendule amanga. Kwakhona, zama ukungaxolisi okanye igama lakho lingakhanjiswa ngendlela engafanelekanga.
Ziziphi iintlobo zomculo ezivela kwiCaribbean?
Iincwadi eziMnandi zeZithombe zeBantwana malunga nokuQala isikolo
Indlela yokutshintsha iBhettery kwiNqwelo Yakho ye-Keyless Remote